यी अभिनेत्रीले गरिन् बलिउड छोड्ने घोषणा, भनिन् – नाम र दाम सबै होइन :: Setopati
यी अभिनेत्रीले गरिन् बलिउड छोड्ने घोषणा, भनिन् – नाम र दाम सबै होइन
एजेन्सी मुम्बई, असोज २३
अभिनेत्री सना खान।
बलिउड अभिनेत्री सना खानले बलिउड छोड्ने निर्णय गरेकी छन्।
सामाजिक संजालमा लामो पोस्ट लेख्दै उनले सोबिजको रंगिन संसार छाड्न लागेको बताएकी हुन्।
'दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, आज म मेरो जिन्दगीको महत्वपुर्ण मोडको बारेमा तपाईंहरूसँग कुरा गर्दैछु। म वर्षौंदेखि शोबिजमा छु र यसबाट मलाई नाम, इज्जत र पैसा आयो जसका लागि आभारी छु', उनले लेखेकी छन्,' तर केही दिनदेखि मलाई मानिस यो दुनियाँमा आउनुको मतलब के धन र इज्जतमात्र कमाउन हो त? के बेसहाराको सेवामा जिवन बिताउनु उसको कर्तव्य होइन? के मान्छेले उसको मृत्यु जतिबेला पनि हुनसक्छ भनेर सोच्नुपर्दैन? मलाई यी प्रश्नको उत्तरको खोजी वर्षौदेखि थियो। खासगरी दोश्रो प्रश्नको। मरेपछि ऊ के हुने हो भन्ने? मैले यी प्रश्नको उत्तर धर्ममा खोजें र त्यहाँबाट मलाई थाहा भयो यो दुनियाँको जीवन त मृत्युपछिको जीवन राम्रो बनाउनलाई रहेछ।'
'मानिसले उसलाई सिर्जना गर्ने भगवानको चाहाना अनुसार जिन्दगी बिताउँदा यो अझ राम्रो हुनेछ। मात्र सम्पति र नामलाई आफ्नो लक्ष्य बनाउन भएन। त्यसको सट्टा पापको जीवनबाट बचेर मानवताको इज्जत गर्नुपर्छ। आफूलाई ल्याउनेले बताएको बाटोमा चल्नुपर्छ', सनाले लेखेकी छन्।
'त्यसैकारणले मैले आज शोबिजको जीवन छोडेर मानवताको सेवामा र मलाई जन्माउने भगवानको बाटोमा हिँड्ने दृढ अठोट लिएको छु। म मेरा तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनलाई मलाई शोबिजमा काम गर्नका लागि नबोलाउन अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद', बलिउड छोड्ने घोषण गर्दै उनले लेखेकी छन्।
५० भन्दा बढी विज्ञापनमा काम गरिसकेकी सनाले आफ्नो करियरको सुरूवात सन् २००५ मा आएको 'सोसाइटी' नामको सिनेमाबाट गरेकी थिइन्।
त्यसपछि 'विग बोस'को छैटौं संस्करणमा सहभागी बनेकी थिइन्। यसबाट उनले राम्रो चर्चा बटुलिन्। त्यसपछि उनले सलमान खानसँग 'जय हो' सिनेमा काम गरेकी थिइन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २३, २०७७
नेहा कक्करले गरिन् रोहनप्रितसँग विवाह
अडिसनमा फेल भए आमिर खानका छोरा
यस्तो छ कमेडीले भरिएको 'लुडो'को ट्रेलर
यस कारण विजयले छाडे मुथैया मुरलीधरनको वायोपिक
घाइते भएका आमिर खानले पेन किलर खाँदै गरे सुटिङ
कंगना रनौतविरूद्ध उजुरी दर्ता